Homeसमाचारकोरोनाका बिरामीको उपचार गाँ’जाबाट हुनसक्ने वैज्ञानिकको नि’ष्कर्ष
November 1, 2020 admin समाचार 6073
विश्वभर महा’मारीका रुपमा फैलिए’को कोरोना भाइरसको संक्र’मणबाट गम्भीर बनेका बिरामी’को गाँजाबाट उपचार हुनसक्ने वैज्ञानि’कहरुले बताएका छन् । अमेरिका’स्थित साउथ यारोलिना विश्ववि’द्यालयका अनुसन्धा’नकर्ताले गरेको अध्य’यनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
वैज्ञानिक’हरुले यसबारेमा तीनवटा अध्य’यन गरेका थिए । तीनै अध्ययनमा गााँ’जाको माध्यमबाट कोरोनाका गम्भीर बिरा’मीलाई उपचार हुनसक्ने निष्क’र्ष निकालिएको छ । यद्यपि यो अन्तिम निष्क’र्ष भने होइन । वैज्ञानिकहरुका अनुसार गाँ’जामा हुने टिएचसी नामक पदार्थले कोरोना संक्र’मितको उपचार हुने सम्भावना छ । उक्त पदार्थले मानि’सलाई खतरनाक इम्युन पाव’रबाट बचाउँछ ।
डेलिमेलले तयार पारेको स’माचारका अनुसार शुरुमा मुसा’मा यसको प्रयोग गरिएको थियो । शुरुमा मुसामा एक टक्सिन दिएर टिएचसी प्रयोग गरिएको थियो ।उक्त मुसा बाँ’चेको थियो र अन्य मु’सा मरेका थिए ।
यसबारेमा वैज्ञानिकहरुले थप अनु’सन्धान गरी अन्तिम नि’ष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन् । अमेरिका’का धेरै राज्यमा गाँजाको प्रयोग वै’धानिक मानिए पनि कैयन् राज्यले प्र’तिबन्ध लगाएका छन् । नेपालमा पनि गाँजाको प्रयो’गलाई अवै’धानिक मानिँदै आएको छ ।-खबरहब बाट
तिहारलाई २० करोडको झि’लिमिली बत्ती आइपुग्यो, मूल्य नबढ्ने
अनौठो फैसला: सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा पतिको भागमा भर्याङ र पत्नीलाई दोस्रो तला पर्यो
April 16, 2021 admin समाचार 2553
डम्बर बा’हादुर लामाको दिन हाँस र बंगुरसँग खेलेरै बित्छ । काठमाण्डौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपा’लिकामा उनको घर छ । घरबाट टाढा मनोहरा खोला’को किनारमा डम्बर बहादुर ला’माले हाँस र बंगुर पालेका छन् । बिहा’नको खाना खाइवरी
June 8, 2021 admin समाचार 1077
May 28, 2021 admin समाचार 2295
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205509)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196875)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196370)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (196214)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194683)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194368)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192588)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192198)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161669)